ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Rotavirus vaccine) သည် ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး(rotavirus)ကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များတွင်ဖြစ်သော ပြင်းထန်သည့်ဝမ်းလျှောရောဂါသည် အများအားဖြင့် ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပြင်းထန်သည့်ဝမ်းလျှောရောဂါ မဖြစ်အောင် (၁၅-၃၄)ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် (၃၇-၉၆)ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးများသည် ဝမ်းလျှောရောဂါကြောင့် ကလေးငယ်များ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြေရှိသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးအထိုးခံခဲ့ဖူးသော မွေးကင်းစကလေးငယ်များမှာ လူကြီးများနှင့် ကာကွယ်ဆေးအထိုးမခံဖူးသောလူများထက် ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးလာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဝမ်းလျှောရောဂါအဖြစ်များသည့်နေရာများတွင် ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အတူ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောရေကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော မိလ္လာစနစ်ကိုအသုံးပြုရန် စသောဆောင်ရွက်ချက်များပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် ပါးစပ်မှ တိုက်ကျွေးရသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ကို ကလေးအသက်(၆)ပတ်တွင် စတင်တိုက်ကျွေးရသည်။ 
ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးသည် စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသူများကိုပါ ပေးနိုင်သည်။ ယခင်ထုတ်လုပ်သော ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားများသည် အူကျွံခြင်း (intussusception)ကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ယခုအသုံးပြုနေသော ဆေးများတွင် တွေ့ရလေ့မရှိပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် အူကျွံနေသော မွေးကင်းစကလေးများတွင် ပေးရန်မသင့်ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးများကို အသက်ရှိသော်လည်း အားပျော့သည့်ရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ပထမဆုံး ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို (၂၀ဝ၆)ခုနှစ်၌ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (၆.၉၆-၂၀.၆၆)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဒေါ်လာ(၂၀ဝ)ကျော်ခန့်ပေးရသည်။ (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတလွှမ်း၌ ရိုတာရစ်(Rotarix) နှင့် ရိုတာတက်(RotaTeq)ဟုခေါ်သော ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား(၂)မျိုး ရရှိနိုင်ပြီး အချို့နိုင်ငံများတွင် အခြားအမျိုးအစားများပါ ရရှိနိုင်သည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "Rotavirus vaccines. WHO position paper – January 2013." (1 February 2013). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations 88 (5): 49-64. PMID 23424730.
↑ "Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use" (2012). Cochrane Database Syst Rev 11: CD008521. doi:10.1002/14651858.CD008521.pub3. PMID 23152260.
↑ Patel MM, Steele D, Gentsch JR, Wecker J, Glass RI, Parashar UD (January 2011). "Real-world impact of rotavirus vaccination". Pediatr. Infect. Dis. J. 30 (1 Suppl): S1–5. doi:10.1097/INF.0b013e3181fefa1f. PMID 21183833.
↑ Rotavirus Vaccine Live Oral။ The American Society of Health-System Pharmacists။ Dec 14, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ WHO Model List of EssentialMedicines။ World Health Organization (October 2013)။ 22 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vaccine, Rotavirus။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 317။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး&oldid=289711" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၄:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။